Kugadzirwa kwembatatisi uye kutengeserana - ongororo yemusika
Pamusika wepasi rose, China ndiyo inogadzira mbatatisi hombe. Muna 2018 kugadzirwa kwegore rose kwakafungidzirwa pamatani emamiriyoni makumi mapfumbamwe. India inoteedzera yechipiri nematani emamiriyoni makumi mana nemasere neUkraine neRussia zvinouya pechitatu nekugadzirwa kwegore nemakumi maviri nemaviri ematani. Pamusika weEuropean, kugadzirwa kwembatatisi kunotungamirwa nevatambi vanotevera: Germany, France, Poland, Netherlands, UK, neBelgium. Mu90, nyika idzi nhanhatu dzakaverenga 48% yehuwandu hwekugadzira mbatatisi dzeEU.
Musika wepasi rose wemashizha embatatisi
Mbatata starch chigadzirwa chechisikigo chakatorwa mumuto wembatatisi. Muindasitiri yezvikafu, chigadzirwa chinoshandiswa zvakanyanya seyakafuta uye gelling mumiririri wezvikamu zvakasiyana-siyana zvinosanganisira bhekari uye confectionery zvikamu. Mbatatisi starch inowanawo mashandisirwo ayo mumapepa, machira, mishonga, uye maindasitiri ekuchengetedza vanhu.
Mbatatisi starch inowanikwa kuburikidza neyekuzvarwa kana nzira yakashandurwa, iyo yekupedzisira ichikura mukuzivikanwa neinotarisirwa kukura kwe8.5% CAGR mukati memakore mana anotevera. Muna 4, indasitiri yemachira yakabata chikamu chakakura kwazvo pamusika maererano nechishandiswa pa2017%. Mukushongedzwa kwemachira, starch inowanzo shandiswa sechinhu chinonamira pakugadzira machira ekotoni.
Mugore iro, kugadzirwa kwembatatisi kweEU kwakaenzana nematani makumi mashanu nemaviri emamiriyoni ayo Germany yakabata mugove wakakura zvakaenzana ne52%. Mugadziri wechipiri pakukura aive France aine 17.2% mugove wemusika uye Poland iri pechitatu ne15.2%. Netherlands yakaburitsa 14.3% yehuwandu hweEU mbatata yakaburitsa asi yakatsaura nzvimbo yakakura kwazvo yekugadzira mbatatisi - 11.6% yenyika yese inorimika.
Kutengeserana kwepasi rese kwesitashi mbatatisi
Kugadzirwa kwesitashi mbatatisi kunonyanya kuisa muEurope kuchiteverwa neNorth America neAsia. Pamusika weAsia, China inotungamira nzira mukugadzira, ichiteverwa neJapan.
Musika weEuropean starch wakaburitsa mari inosvika madhora 1.71 bhiriyoni muna2017.Gore iro, kutengesa kwese kwembatatashi starch mukati meEU kwakasvika pamusoro pe 1.23 mamirioni ematani pamutengo we € 668 miriyoni. Hwekunze kutengeswa kunze kweEU muna 2017 kwakaunza € 424 mamirioni emari kubva pamatani mazana masere nemakumi masere nesere ezviwanikwa, nepo kutengeswa kwese kuitirwa mamirioni mazana maviri nemakumi mana nemana emamiriyoni mazana mana nemakumi mana.
Intra EU kutengeserana muna 2018 yaive pamamiriyoni manomwe ematani ematani ematatata pamutengo wemusika we € 7 bhiriyoni, iwo 1.7% yaive starch matapiri. France ndiyo yaive mutengesi mukuru we starch mbatatisi mukati meEU yatengesa 1.8 90 zviuru zvematani echigadzirwa nemutengo we € 300 miriyoni. Germany yakaramba iri yechipiri nekutengesa kunosvika pamazana mashanu ematani ematani pamamirioni emamiriyoni e16.1 mumari.
VeEurope vekunze vanotengesa mbatata starch
Mu2018, iyo Netherlands yakatengesa mbatatisi starch nemutengo we € 137 mamirioni, kuwedzera kweinenge 10% kubva pagore rapfuura. Muna 2019, kutengeserana kwepasi rose kwembatatisi kwaifungidzirwa pamadhora zviuru mazana masere nemakumi matatu, kuderera kwe830% kubva pagore rapfuura. Gore iro mutengesi wepamusoro aive Germany nekutengesa kwakakosha madhora mazana masere nemakumi masere nemazana masere emadhora makumi maviri nemasere - 0.78% - gore rakazotevera mugove wenyika mukutengesa zvinhu wakakura kusvika pa198%. Mu23.9, iyo Netherlands yakatora chinzvimbo chechipiri maererano nekutengesa kunze kwenyika kwakaunza $ 42.30 miriyoni, uye Denmark ine $ 2019 mamirioni. Vamwe vekunze vanotengesa kunze kwenyika vaive Poland neFrance nekutengesa kunokosha $ 180 miriyoni uye $ 136 mamirioni zvakateerana.
Kutengeswa kwemashizha embatatisi
Mugore rimwe chetero, vatengesi vakuru vembatatisi vaive United States nekutenga kunosvika madhora zana nemakumi mashanu emadhora, kuchiteverwa neNetherlands neSouth Korea vese vachishandisa $ 105 miriyoni imwe neimwe kuendesa. IUK yakatora chinzvimbo chechitatu nekutenga kwakakosha madhora mazana mashanu ane makumi mashanu ane makumi mashanu emadhora uye Germany nemadhora mazana mana nemamiriyoni makumi mana nemapfumbamwe.
Musika wepasi rose wemapurotini embatata
Potato mapuroteni chigadzirwa-chinowanikwa kubva muto wembatatisi wakatorwa panguva yekugadzirwa kwesitashi yetapiri. Mukugadzirwa kwechikafu, mapuroteni embatatisi anozivikanwa neprotein yavo yemukati uye yakaderera kwazvo allergenicity. Kudya kwemhuka kunowedzeredzwa nemapurotini embatatisi kunowedzera kukosha kwayo kwehutano ichisara yakanyanya kugaya.
Musika weprotato yemapatatisi waifungidzirwa kudarika $ 110 miriyoni muna2020 uye unotarisirwa kukura paCAGR ye4.5% pakati pa2021 na2027 ichizosvika $ 150 miriyoni. Muna 2018, musika weEuropean ndiyo yaive dunhu rakakura kwazvo kune mapuroteni embatatisi ane huwandu hunofungidzirwa $ 34.1 miriyoni. Kuwedzera kwemusika kunotarisirwa mune ramangwana nekuda kwekuwedzera kufarira kune dzimwe nyama pamwe nekufambira mberi kwetekinoroji inogonesa kugadzirwa.
Muna 2020, chikamu chikuru pamusika weAsia Pacific chakakweretwa kuChina uko musika unodarika $ 7 miriyoni. Asia Pacific musika wemapurotini embatata unofungidzirwa kuti unokosha kudarika $ 38 miriyoni muna 2027 nekuda kwekuwedzera kwekuda kwezvirimwa-zvakagadzirwa zvigadzirwa uye kukura kwechido mune yakakwira-mapuroteni vegan chikafu. Musika weNorth America wemapurotini embatatisi unofungidzirwa pamadhora mazana matatu nemakumi mashanu neshanu muna38.5 uye unofungidzirwa kuti uchakura pa2021% CAGR mukati memakore gumi anotevera.
Zvishandiso zveprotini yemazamu
Iyo mapuroteni embatatari anoparadzanisa zvikamu zve65% yemugove wemusika mumutengo wezvekukosha. Chikamu chinotonga chakanangana nekushandisa kugadzira chikafu ne67% yemugove wemusika sekudiwa kwakakura kweprotein yemapatatisi kunobva muindasitiri yekubheka. Zvakangodaro, iwo musika weNorth America unotarisirwa kukura zvakare nekuda kwekukura kwechido muzvirimwa-zvinodyiwa zvekudya uye zvekudya zvemhuka zvinowedzera. Muna 2020, musika wepasi rose kukosha kwechikamu chekushandisa chikafu chemapurotini embatata chakasvikira pamadhora makumi mashanu emamiriyoni apo chikumbiro chechikafu chakagadziriswa chakafungidzirwa pamadhora mazana matanhatu emadhora.
Mukati memakore manomwe anotevera, chikamu chemukaka-chisina chikumbiro chinofungidzirwa kuti chinokura pamusoro pe7% CAGR nepo musika weiyo fomu yakanyatsogadziriswa yeprotini yembatatisi ichakura kupfuura 4% CAGR. Chikamu chekudya kwemhuka chinotarisirwa kukura pa4.5% CAGR mukati memakore mashanu anotevera. Iyo yepasirese mbatatisi mapuroteni yekuzvitsaura chikamu yakafungidzirwa pamadhora makumi matatu nemana makumi matatu muna4.8.
verenga zvakawanda nezve kugadzirisa kunobva foodcom.pl
European Yakagadziriswa Mbatatisi Musika: Heano Pane matatu Mitsva Mirayiridzo kuDhivha Evolution
Mbatatisi acreage muFlanders iri kutora yakakosha dip
Maseru ePatata ePasser Anogamuchira Chip Callahan SaMutungamiriri Wekutengesa Kwezvokudya
Mbatata Kukohwa Canada inotapudzwa nechando chakanyanya.